भाइरल ब्वाई अशोकको भन्दा कम छैन यी बाटोमा गित गाउदै हिड्ने बहिनीको स्वर (भिडियोमा हेर्नुहोला ) - Taja Report
Homeसमाचारभाइरल ब्वाई अशोकको भन्दा कम छैन यी बाटोमा गित गाउदै हिड्ने बहिनीको स्वर (भिडियोमा हेर्नुहोला )
भाइरल ब्वाई अशोकको भन्दा कम छैन यी बाटोमा गित गाउदै हिड्ने बहिनीको स्वर (भिडियोमा हेर्नुहोला )
July 7, 2018 समाचार Comments Off on भाइरल ब्वाई अशोकको भन्दा कम छैन यी बाटोमा गित गाउदै हिड्ने बहिनीको स्वर (भिडियोमा हेर्नुहोला )
युटुबबाट भाइरल भएका बाल गायक अशोक दर्जीलाई सायद नचिन्ने कम छन् । मलेसिया र दुवैको कार्यक्रम सकेर बाल गायक अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकी आए लगतै पोखराको कार्यक्रम सकेर अशोकको घर निर्माणका लागि झापा गएका छन् । गर निर्माण कार्य तिब्र गतिमा रहेको निर्माण पक्षको भनाइ छ । गायक टंक र अशोक दर्जी भिभिन्न इस्टेज कार्यक्रममा ब्यस्त छन् । उनिहरुको डिमाण्ड अन्य बाहिरी देश बाट भैरहेको टंक बुढाथोकिको भनाइ छ । बाटोमा गाउदै हिड्ने अशोक अहिले एक सेलिब्रेटी भएका छन् ।अशोक दर्जी जस्तै बाटोमा गाउदै हिड्ने एक बहिनीको स्वरले पनि तपाईहरुको मन जित्न सक्छ ।
यसरी भएको थियो अशोक को चर्चा त्यो पनि पढ्नुस , भिडियो हेर्न तल सम्म स्क्रोल गर्नुस है
भाइरल व्वाई अशोक दर्जीले गाएको पहिलो गीत ‘मन बिनाको धन’ यूट्यूवमा आएलगत्तै चर्चित बनेको छ । आक्रामकरुपमा भ्यूज बटुलिरहेको गीतमा लाइक र कमेन्टको बाढी नै आएको छ ।
गीतमा आएका प्रतिक्रियाहरुबाट दंग छन् संगीतकार टंक बुढाथोकी । आफूले सोचेभन्दा पनि राम्रो रेस्पोन्स पाएको उनी बताउँछन् ।
‘अशोकको गड गिफ्टेड भ्वाइस नै उच्च क्वालिटीको छ । त्यसलाई सुरमा ढालेर मैले प्रस्तुत गरेँ । सबैले एकदमै मन पराइदिनुभएको छ । अत्यन्त खुशी छु,’ उनले भने ।
यो गीतका शब्दहरु बिराज नेपालका हुन् । उनले धेरै वर्षअगाडि यो गीत टंकलाई दिएका रहेछन् । टंकले त्यतिबेला देखि रेकर्ड नगरी आफ्नो छोराका लागि साँचेर राखेका थिए ।
आफ्नो पाँच वर्षका छोरालाई टंक संगीत सिकाइरहेका छन् । उनका केही गीतहरु यूट्यूवमा समेत आइसकेका छन् । चाँडै नै छोराको स्वरमा यो गीत रेकर्ड गराउने उनको योजना थियो । तर यही बीचमा आए अशोक दर्जि ।
डिजे रुपकले अशोकलाई झापाबाट टिपेर काठमाडौं ल्याए र टंकको जिम्मा लगाए । टंक उनलाई फिट हुने गीतको खोजिमा लागे । कस्तो गीत दिने भन्ने उनलाई अन्योल भयो ।
‘रोमान्टिक गीत गाउन उमेर पुगेको थिएन, बाल गीत दिउँ भने उसका सबै फ्यानहरुको चित्त नबुझ्न सक्थ्यो,’ उनले भने । अन्ततः उनले आफ्नै छोराको लागि साँचेको गीत अशोकलाई दिने निर्णय गरे ।
अशोक एकातिर अक्षर नचिन्ने । अर्कोतिर सुर-तालको ज्ञान नभएको । टंकलाई निकै गाह्रो भएको थियो । पहिलो दिन उनले अशोकलाई स्टुडियोमा लगेर प्राविधिक कुराहरु बारे जानकारी गराए । दोस्रो दिन अशोककी पि्रय गायिका मेलिना राईलाई बोलाएर भेटाए र तेस्रो दिन मात्र अशोकको गीत रेकर्ड गराए । आफ्नो सानो छोरालाई संगीत सिकाइरहेको अनुभवले अशोकलाई सिकाउन सहयोग गरेको टंक बताउँछन् ।
पहिले निकै उत्ताउला अशोक अहिले केही ज्ञानी भएका छन् । स्कुल जान थालेपछि केही अक्षरहरु पनि चिन्न थालेका छन् । अहिले उनर्लाइ गायनमा भन्दा पढाईमा फोकस गरिने टंक बताउँछन् । साथै उनको परिवार अति विपन्न भएकाले उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । यसका लागि उनले सबैसँग आर्थिक सहयोगको आह्वान गरेका छन् ।
के तपाइलाइ थाहा छ ! यसपटक साउनमा १६२ वर्ष पछि पर्यो यस्तो निकै दुर्लभ संयोगः राम्रो प्रतिफल मिल्ने धार्मिक विश्वास !
लाइसेन्स लिन गएका सर्वसाधारणलाई यातायातका कर्मचारीले उफ्री-उफ्री कराँते शैलीमा मर्नेगरी कुटे (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (824)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (387)
जग्गा नापमान सम्बन्धि अत्यन्तै महत्वपूर्ण जानकारी तपाईंलाई छ ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस (234)
खुसिको खबर :- यी हुन् महान नेपाली महिला जसले बनाइन् क्यान्सर निको पार्ने घरेलु औषधी !… (136)